एनआरएन उपाध्यक्ष आचार्यले अभियन्ता डा. प्रमोद ढकाललाई सम्झिए – Janacharcha.com
» प्रवासी–नेपाली अंक: 553
एनआरएन उपाध्यक्ष आचार्यले अभियन्ता डा. प्रमोद ढकाललाई सम्झिए
केन्द्रिय अध्यक्षको लागि अचार्यको तयारी
टोरन्टो, भाद्र ०२
गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएन अभियन्ता डा. प्रमोद ढकाललाई सम्झिएका छन् ।
शनिवार यहाँ आयोजित एनआरएन क्यानडाको १२ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले डा. ढकालले खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न क्यानडा छाडेर नेपाल मै ६, ७ वर्ष बसेर रातदिन काम गरेको तर विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि उहाँलाई नसमेटिएको गुनासो गरे । “नेपालमा बौद्धिक लगानीको कुरा गर्दा हामीले प्रमोद ढकाल जस्ता अभियन्तालाई विर्सन हुंदैन, उहाँहरुको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ,” उनले भने ।
उपाध्यक्ष आचार्यले सबै एनआरएनहरुको प्रमुख चासो रहेको नेपालमा सम्पत्ति सुरक्षाको विषय र गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयबारे पनि बोलेका थिए । “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐनमा उल्लेखित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार भनेको के हो भन्ने स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकको रुपमा हामीसंग रहेको सम्पत्ती गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाए पछि पनि सुरक्षित हुनेछ भन्ने प्रस्ट खुलाउन जरुरी छ। भूतपूर्व गोर्खाहरुको लागि पनि विशेष व्यबस्था हुनुपर्छ,” उनले भने “गैर आवासीय नेपाली नागरिकतासंगै पासपोर्ट दिने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । ” उनले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफल पछि आशंका उब्जिएको बताउंदै सबै साथीहरुलाई कानून नबन्दासम्म प्रयास जारी राख्न, चनाखो रहन र लबी गरिरहन आग्रह पनि गरे ।
आचार्यले आउंदो अक्टोबर महिनामा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एनआरएनएको विश्व सम्मेलनमा केन्द्रिय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने बताइ सकेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क र डालसको भ्रमण पछि उनी शुक्रवार टोरन्टो पुगेका थिए ।
कार्यक्रममा क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भृगु ढुंगाना लगायतका वक्ताले शुभकामना दिएका थिए । १२ औं साधारणसभाले चिरन्जीवी घिमिरेको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय नयां कार्य समिति गठन गरेको छ ।